Baro 10 Cunto Oo Baruurta(Cayilka) Daban Kaa Ridi Kara | Hawraar
June 2, 2016 Xiisaha/Xulashada
Baro 10 Cunto Oo Baruurta(Cayilka) Daban Kaa Ridi Kara
Cuntooyinka aynu cunno, gaar ahaan cuntooyinka lagu yaqaanno in ay buurnida yareeyaan oo ay khubarada ku xeel-dheer cilmiga cuntada iyo faa’idada ku jirtaa caddeeyeen in ay miisaanka dhinto.
Boorashka: Boorashku waa cuntada ugu fiican ee ay tahay in uu cuno qofka doonaya in uu miisaanka iska dhimaa, waayo waxa uu ka mid yahay cuntooyinka baalka leh sidaa awgeed waxa uu u fiican yahay caafimaadka caloosha qofka .
Tufaaxa: tufaaxu waxa uu ka mid yahay midhaha ugu badan ee daraasadan lagu sameeyay natiijada kasoo baxday ee ku aadan faaidooyinkiisana waxay ahayd mid aad u wanaagsan. Tufaaxu waxa uu kaa caawin karaa inaad miisaanka iska dhintid
Kaabashka: Kaabashku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka faa’idooyinka badan ee caafimaad ay ku jiraan, waxaa ka mid ah in uu badiyo kaadida taasina ay gacan weyn ka geysato hoos u dhaca miisaanka. Daraasado cilmiya ayaa iyaguna xaqiijiyey in uu si weyn wax uga taro ka hor tagga iyo baabi’inta burooyinka kansarka ah iyo guud ahaanba sababaha kansarka keena.
Saliid Olive-ta (olive oil): Xeel dheerayaasha nafaqada jidhka waxay isku raaceen in saliida oliv-tu muhiim u tahay jidhka. Saliidaan waxay kaa caawinaysaa inay ilaaliso kolestaroolka (duxda).
Looska: Badso cunista noocyada kala duwan ee looska waayo waxay yareeyaan caloosha, daraasad ay samaysay Purdue University ayaa lagu ogaaday in dadka cuna looska ayna mudo dheer gaajo dareemin marka loo eego kuwa cuna quraaca oo ka mid ah cunooyinka kordhiya calories-ka.
Jugulaatada Madow: Daraasado badan ayaa sheegaya in jugukolaatadu lug ku leedahay dhimista miisaanka ama buurnida. Fayberka ay ka samaysan tahay jugulaatadu ayaa waxa uuu yareeyaa in uu jidhku kaydiyo dux (subaga, baruurta), sababana in uu qofku dareemayo in uu dheregsan yahay
Sinjibiisha: Sinjibiisha oo xaddi macquul ah lagu darsado shaaha ama xataa biyaha caadiga ah ee la cabbaa waxa ay leedahay faa’idooyin caafimaad, oo ay ka mid tahay in ay jidhka ka saarto suntan, sidoo kale waxa ay leedahay faa’idada ah in jidhku iska saaro dareeraha saayidka ah ee k u haraa ama ku urura.
Blueberries: midhaha yar ee ee canabka u eg ee blueberries loo yaqaan waxay hoos u dhigaan heerka kolestaroolka.
Saliida Kalluunka: Cilmi baadhis ay samaysay jaamacada University of South Australia aya lagu ogaaday in hadii qofku uu badsado saliida kalluunka isla markaana jimicsi ku daro ay kordhayso fursadiisa ah inuu buurnida iska yareeyo.
Ukunta: Waxey gacan ka geysataa dhimista miisaanka, ukunta waxaa ku jira nafaqooyin muhiim ah, cilmi baadhayaasha jaamacada Louisiana State University ayaa sheegay in dadka subixii ku quraacda ukunta uu miisaan badan ka dhaco marka loo eego kuwaan aan ku quraacan